Madaxa HAD ee JWXO Mudane C/raxman M. Sheikh Mahdi (Maadey) oo siweyn wadanka Koonfur Afrika loogu soo dhaweeyay kulan muhiim ahna xubnaha JOKA ee Johannesburg layeeshay la yeeshay.
Feb 12, (2013 (QOL) Madaxa Hogaanka Arimaha Dibadaee Jabahadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya (JWXO) ayaa siwayn loogu soo dhaweeyay magaalada xarunta ganacsigaEe Johannesburg, wadanka Koonfur Afrika Mas'uulkan ayaa maalmahan hawlo kormeer kujoogay wadankaKoonfur Afrika wuxuuna kulamo la layeeshay Mas'uuliyiinta Jaaliyada Ogaadeenya ee Koonfur Afrika.
Mas'uulka ayaa siwaafi ah uga maqsuuday warbixinta jaaliyada isla markaana bogaadiyay hawlaha halganka ee ay jaaliyadu kawado wadanka Koonfur Afrika wuxuuna la kulmay hawlwadeenada JOKA ee gobolka Gauteng (Qawtayn) wuxuuna warbixin waafi ah kajeediyay shirkaas, warbixintaas ayaa ku jawahnayd halganaka taariikhiga ah ee uu kujiro shacabka Soomaalida Ogaadeeniya.
Mudane Maadey oo kamid ah aas-aasayaashi Ururka ONLF oo lagu unkay gudaha Jamhuuriyada Soomaaliya 15/08/1984 ayaa kawar bixiyay maraaxishii uu halganku soo karay wuxuuna xusay in halganaka shacabka Soomaalida Ogaadeenya uu galay waji cusub oo inbadan la higsanayay taas oo uu kutilmaamay in lagu gaadhay idimka Alle SWT & adkaysiga shacabka Soomaalida Ogaadeenya, Mudane Maadey wuxuu xaqiijiyay in Ciiddanka Jabahadda Waddaniga Xoreynta ee jiida hore ay quusiyeen ciidamada gumaysiga Itoobiya ee Ogaadeenya ku sugan oo uu sheegay in ay aad u daalan yihiin mooraalna aysan lahayni.
Warbixintaas oo aad loo xiisaynayay kadib waxaa Mas'uulka lawaydiiyay su'aalo muhiim ah oo dhamaantood uu si waafi ah uga jawaabay, shirkan oo socday 4 saaacadood ayaa ahaa mid ay dadkii ka soo qayb galay aad ugu bogeen wuxuuna ku soo dhamaaday guul & rayn rayn, MudaneMaadey ayaa la filayaa inuu booqashadiisa Waddanka Koonfur Afrika sii wadan doono kulamona uu la qaadan doono qaybaha kala duwan ee Bulshada hadii uu Alle idmo. Socdaalka Mudane Maaday & wixii dambe ee ka soo kordha Qorahay Media kala soco.
Gumaysidiid Qorahay Media